Microsoft inozoparura Linux-based operating system: Azure Sphere, sisitimu inoshanda yeIOT | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inozoparura Linux-based operating system: Azure Sphere, inoshanda sisitimu yeIoT
Kwemwedzi yakati wandei tanga tichinzwa manzwi uye runyerekupe nezve basa raMicrosoft neLinux Kernel, chimwe chinhu chakazivisa kugadzirwa kwe Mahara Windows. Chinhu chisingafungidzike kune vazhinji vatungamiriri veMicrosoft pamwe nevazhinji vanovenga kambani.
Zvisinei, mushure mekunyarara kukuru, Microsoft nezuro yakaunza system yekushandisa inoenderana neLinux kernel, Azure Sphere, kunyangwe ichave isiri kugovera kana sisitimu inoshanda seWindows kana Debian asi sisitimu yekushandisa yeInternet yezvinhu.Azure Sphere mhinduro yeIoT, imwe proprietary kana quasiprivative imwe nzira iyo ichaedza kukwikwidza neUbuntu Core yenyika yeInternet yezvinhu. Iyo yakasimba poindi yeAzure Sphere ichave chengetedzo. Sezvineiwo, inoshandisa yakaturikidzana sisitimu yeTOR yeiyi. Nekudaro, Azure Sphere inoumbwa nematatu matatu: rukoko rwechengetedzo runoshanda seye firewall pakati peiyo inogona kuve nenjodzi Hardware uye yekushandisa smart kifaa; yechipiri dura iyo ichave iri inoshanda system pachayo uye kuti ichave yakachengeteka kupfuura mamwe masisitimu anoshanda uye dura rechitatu iro rakavakirwa pasimba remagetsi ecosystem inoenderana neAzure, Mhinduro yeMicrosoft kumasevhisi eCloud. Nekudaro, Microsoft inotarisira kupa yakachengeteka, yakavanzika uye yemahara nharaunda panguva imwechete kune vashandisi vezvigadzirwa zvehungwaru kana kuti panzvimbo iyo Internet yezvinhu.
Azure Sphere ichaedza kukwikwidzana nemamwe maLinux mhinduro eIoT
Vazhinji vakarohwa nenyaya yekuti Microsoft yakasarudza iyo Linux kernel kuti igadzire iyi mhinduro, asi pachezvangu ndinofunga zvine musoro. Parizvino, yakawanda software inogadzirwa inogadzirirwa Windows, zvinoreva kuti kurwiswa kwakawanda paWindows uye nekuwedzera kuchengetedzwa kwetsikidzi. Asi, Kune ese ari maviri kernel uye Gnu / Linux zvinoshandiswa, hapana kana kurwiswa uye hazviwanzo kugara kune akawanda mabugs, saka parizvino mhinduro yakachengeteka uye ine simba. Nharo mbiri dzandinofunga dzaita kuti Microsoft isarudze iyo Linux kernel.
Tinogona kuziva rumwe ruzivo nezve chirongwa chiri pa Microsoft yepamutemo webhusaiti, asi hapana chekubatanidza chinongedzo zvakadaro saka zvinoita sekudaro Azure Sphere chimwe chigadzirwa cheBUILD chichaitika kutanga kwaMay 2018 kupfuura chigadzirwa chekupedzisira. Chero zvazvingaitika, isu tichafanirwa kumirira iyo BUILD kuti tione izvo zvinogona kuitwa neAzure Sphere uye kuti "saka" yakasununguka sei Unofungei? Iwe unofungei nezve Azure Sphere? Iwe unofunga kuti Microsoft ichagadzira Mahara Windows mushure meAzure Sphere?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inozoparura Linux-based operating system: Azure Sphere, inoshanda sisitimu yeIoT
Juan Hapana akadaro
Mumamiriro azvino, zvinoita kunge imwe ye "waporware" mazhinji ayo Microsoft anoburitsa nguva nenguva kuitira kuti vashandisi varambe vachivatarisa pane kutarisa kune munhu anonyatsoita basa.
Pindura Juan Hapana
Tomb Raider inouya kuGnu / Linux zviri pamutemo; izvi ndizvo zvaunoda kuti ushande
Sayonara yakanaka kwazvo isingaremi mimhanzi mutambi weLinux